Xaaladda Jasiiradda Puerto Rico ee Mareykanka oo laga dayrinayo – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaXaaladda Jasiiradda Puerto Rico ee Mareykanka oo laga dayrinayo
Xaaladda Jasiiradda Puerto Rico ee Mareykanka oo laga dayrinayo
Hiiraan Xog, Oct 01, 2017:- Xaalada ka jirta jaziiradda Puerto Rico ee ka tirsan dalka Mareykanka oo ay labo jeer ku dhufatay duufaanta Hurricane ayaa ah mid aad u liidata xilli muran siyaasadeed oo ba’an uu hareeyay dedaalada Mareykanka uu kaalmada ku gaarsiinayo dadka halkaa deggan.
Toban maalmood kaddib masiibadaasi ayaa deegaanada Jasiiraddaasi waxaa ka jira koronto la’aan, iyadoo deegaanada ka baxsan magaalada caasimadda ahi aanay ka jirin biyo, cunno iyo shidaal.
Dedaalada gargaarka loogu fidinayo dadka halkaa ku tabaaleysan ayaa sii xoogeysanayo, iyadoo gawaari kuwa xamuulka ahi ay gargaarka aadka loogu baahan yahay gaarsiinayaan halkaasi.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qoraallo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku ballan qaaday in uu taageero u fidin doono dadka Puerto Rico ee ay duufaantu wax yeeleysay. Balse waxa uu xaaladda halkaa ka jirta ku eedeeyay saraakiisha maxaliga ah ee Jasiiraddaasi, xisbiga dimuquraadiga iyo warbaahinta.
Weriyeyaasha ayaa sheegaya in madaxweyne Trump uu halis ugu jiro inuu siyaasadeeyo masiibada bani’aadannimo ee halkaasi ka dhacday, iyadoo ay suurtagal tahay in dadka ku dhaqan Puerto Rico ay dareemaan in ay yihiin muwaadiniin ka derajo hooseeyo kuwa kale ee Mareykanka.
Dowladda Austria oo mamnuucaysa indho shareerka ay qaatan dumarka